ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏စိုးရိမ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာသည်ကမ်းခြေများနှင့်နိမ့်ကျသောကျွန်းများပေါ်တွင်နေထိုင်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့်အရေးယူခြင်းမရှိပါက \_ t ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကြီးအကျယ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုရှိလိမ့်မည်မှာသေချာသည်.
ယခုအချိန်အထိသမုဒ္ဒရာ၏ပျမ်းမျှအဆင့်သည်တစ်နှစ်လျှင် ၁.၃ မှ ၂ မီလီမီတာနှုန်းဖြင့်မြင့်တက်သည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သုတေသနအသစ်များအရ၎င်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမြင့်တက်လာကြောင်းပြသခဲ့သည်.
ပြီးခဲ့သည့်ရာစုအတွင်း သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်သည်ဒီရေတိုင်းတာခြင်းကွန်ယက်မှလာသည် ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင်တည်ရှိသည်။ သင်ဤနယ်ပယ်များတွင်မည်မျှတိုးပွားလာသည်ကိုသိလိုပါကဤကိရိယာများသည်အလွန်အသုံးဝင်သည် သူတို့သည်သင့်အားလုံးလုံးလျားလျားရလဒ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ Sönke Dangendorf ၏လေ့လာမှုကို ဦး ဆောင်ရေးသားသူမှကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်လွှာ၏ဒေါင်လိုက်ကမ္ဘာလှုပ်ရှားမှုနှင့်သမုဒ္ဒရာလည်ပတ်မှုပြောင်းလဲခြင်း၊ လေအားပြန်လည်ဝေငှခြင်းသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဒေသဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုပုံစံများအရ၎င်းတို့ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ရေနှင့်ရေခဲထု၏ပြန်လည်ခွဲဝေမှု၏မြေထုဆွဲအားသက်ရောက်မှု။
ဒါကြောင့် ၂၀ ရာစုကတည်းကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဘယ်လောက်မြင့်တက်သွားတယ်ဆိုတာအတိအကျသိဖို့သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေက အရှည်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမှတ်တမ်းများကိုရွေးပြီးမှားယွင်းသောရလဒ်ကိုပေးနိုင်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောအချက်များအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့သည် ၁၉၉၀ မတိုင်မီအထိပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်သည်တစ်နှစ်လျှင် ၁.၁ မီလီမီတာမြင့်တက်လာသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ လူသားတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကြောင့်သိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်သည်ယခင်ကထင်ထားသည့်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်